Oge 'Bachelor' nke 22 Premiere 1 Recap - Ozi
'The Bachelor' Episode 1 Recap: Nabata na Oge Kasị Egwu
Na-eso ọnwa itoolu na-atụ ụjọ, Bachelor emesia laghachi na ABC inye Arie Luyendyk Jr. (ị maara, onye na-agba ọsọ site n'oge Emily Maynard) gbaa na ịhụnanya na 29onye araụmụ nwanyị kwesịrị ekwesị.
Oge 22, ihe omume malitere site na ịmaliteghachi na obi mgbawa Luyendyk Jr. tara ahụhụ n'oge asatọ Ndị Bachelorette . Mgbe o nwetasịrị mbibi ya (na nke anyị), ọ na-akọwa na ọ na-achọ ihe dị iche iche n'oge a. Ugbu a ọ bụ onye nwe nganga nke azụmaahịa azụmaahịa na-aga nke ọma, ọ mechara dị njikere ịnara Bachelor leap nke okwukwe na olile anya nke ịchọta nwanyi kwesiri nchikọta ụgbọ ala ya.
Tupu izute ndị asọmpi ọhụrụ ahụ, Luyendyk Jr. anọdụ ala na oge 17 Bachelor Sean Lowe; nwunye ya, Catherine Giudici; na nwa ha nwoke dị afọ 1, bụ́ Samuel. Mgbe Luyendyk Jr. dị obere gosiputara ikike nna ya, Lowe ji ụfọdụ obi sitere na-tupu ndụmọdụ wee gbaa Luyendyk Jr. ume ka ọ kwanyere ụmụ agbọghọ ugwu. (Duh.)
Anyị gafere na Chris Harrison guzo n'èzí aha ọjọọ Bachelor mansion, n'ihi na maa ihe? Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ izute ụmụ nwanyị. Harrison na-abanye oge dị egwu na-abịanụ site na ichetara anyị na Luyendyk Jr. bụ otu n'ime ndị na-esusu ọnụ kachasị mma, dị ka mgbe ọ bụla amara ABC, anyị enweghị ike ịjụ ma onye gosipụtara nke a.
N’ikpeazụ, limo nke mbụ rutere ịchụsị n’abalị. Ndị a bụ deets nke ọbịbịa nwanyị ọ bụla ...
Caroline (26): Ọ bụ onye na-ere ahịa ụlọ (ee, dị ka Luyendyk Jr.) nke a na-eme nke ọma na-eme egwuregwu egwuregwu.
Chelsea (29): Otu nne na-azụ ụmụ nke akwara ya kacha mma.
Kendall (26): O nwere ụjọ dika nwoke nke oge.
Seinne (27): Ọ na-enye ya enyí n'ihi na ọ bụ anụmanụ kachasị amasị ya, oh, ọ na-anọchitekwa iguzosi ike n'ihe.
Tia (26): Ọ bụrụ na ngwoolu ahụ enyeghị ya, ọ bụ IRL BFF nke onye bụbu onye asọmpi Arkansas, Raven (oge Nick Viall). Ọ na-enye Luyendyk Jr. ihe ncheta wiener n'ihi na o si na Weiner, Arkansas ... nweta ya?
Bibiana (30): ikpe mara nke ifu n’anya ya.
Brianna (25): Onye na-ede akụkọ egwuregwu na-enwebeghị ike ịkwụsị agụụ nwata na softball.
Jenny (25): Ọ na-arụsi ọrụ ike na-enwe mmasị na ọdịdị ya iji kwuo banyere ọtụtụ ihe ọ bụla ọzọ.
Brittane (27): Ọ na-agwa egwuregwu banyere Ferr- Aries na akwụkwọ mmado tupu ha enye ya ngwa ya nke aka ya. Nkọ.
Jacqueline (26): Ọ gwara ya ka ọ kwụrụ ebe ahụ ma maa mma.
Krystal (30): Onye na-ahụ maka ahụike na ahụike na-ahụ maka ịntanetị (na-eche 'vidiyo aerobics 80s') na-eme nke ọma.
Nysha (30): Ọ bụ nọọsụ nke gbasara adrenaline ahụ. Na mbụ.
Valerie (25): Gal nke Tennessee nwere ihe maka agba agba.
Bekah (Ọ dịghị afọ site na ABC): Onye na-aga Ebe ahụ na-abata na a ụgbọala-ụgbọala-acha ọbara ọbara ’65 Mustang. Mberede.
Jenna (28): Ihe o choro bu nwoke mara nma, nwoke siri ike na ndu ya, unu.
Jessica (26): Onye nchịkọta ụtụ (nke dị mkpa) nke nwere mmasị maka nkume.
marilyn monroe kwuru banyere ụmụ nwoke
Marikh (27): Naanị onye nwe ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ nke obere obodo na-achọkwu nnu na ose na ndụ ya. * Cue nkịta ọhịa ọlaọcha *
Olivia (23): Naanị ya hụrụ n'anya ya na oge Emily.
Becca (27): Nwa agbọghọ ahụ nke na-echezọ ịkpọ aha ya wee mee ka ọ gbadaa n'otu ikpere. (Know mara, maka omume.)
Lauren S. (31): Otu n'ime anọ. Nwatakịrị nwanyị nwere mmụọ nwere mmụọ siri ike.
Lauren J. (33): Abụọ n'ime anọ. O nyere ya Mardi Gras chapletiji chetara ya onye Lauren ọ bụobodo ya.
Lauren B. (25): Atọ n'ime anọ. Okwu mmeghe, o nwere nnukwu akpụkpọ ụkwụ ọ ga-ejupụta aha ahụ .
Lauren G. (26): Anọ n'ime anọ. Ọ gwara Luyendyk Jr. na ya kwesịrị icheta ya , n'agbanyeghị anọ ndị ọzọ Laurens na ihe nkiri a oge ...
kwụpụ maka obere ntutu
Ashley (25): O nwere obi ike na ọ ga-eme ka ọ gwụ, ọ na-enye ya ọkọlọtọ checkered iji mee ka usoro ahụ dị ngwa.
Brittany (30): Ọ na-anwa (ma daa) ịgwa Luyendyk Jr. na ọ mara mma na Dutch. A maka mgbalị?
Amber (29): Ọ na-amalite ike site n’ikwu na ọ bụ onye nwe ụlọ dị mpako nke ụlọ ọrụ na-agba mmiri spray wee chetara ya ọtụtụ ndị nwoke gba ọtọ ọ hụrụ n’ihi ọrụ a kwuru.
Ali (27): Um, ọ na-amanye ya ka ọ nụ isi na-elele akụkụ akpa ya wee nyefee ọchị egwuregwu olulu. * Ba-dum-tss *
Annaliese (32): Aka the Kissing Bandit. Ọ na-eyi ihe nkpuchi masquerade dị omimi nke na-ezochi njirimara ya ... sorta.
Maquel (23): Nke ikpe azu ma n’abụghi, ọ bụ onye agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ na-ese foto nke na-enwetakarị ọbịbịa Bekah site na ịbịaru ọsọ na-agba ọsọ na-agba ọsọ.
Phew. Ọ bụ oge ezumike maka oriri mmanya.
Ka Luyendyk Jr. na-abanye n'ime ya, Chelsea (ihe ịtụnanya!) Bụ onye mbụ na-ezu ohi maka mkparịta ụka otu na-otu. Ma ọ bụghị ngwa ngwa, Chelsea. Nkeji iri atọ n'ime nkata ya, Maquel batara na nke mbụ nke oge ahụ. Ya mere ọ malitere.
Site n'inwe Jacqueline na pizza na Caroline na-egwu egwu na Kendall na ịgụ akwụkwọ ozi na Becca, ụmụ nwanyị na-ekpuchi ihe niile Bachelor ntọala mgbe ọ na-abịa n'abalị otu. N'agbanyeghị nke ahụ, enwere isi ihe abụọ dị mkpa iburu n'uche.
Nke mbụ, Brittany na-eweta Luyendyk Jr. n'èzí iji gbaa ọsọ obere ụgbọala (Luxe Barbie Power Wheels Jeeps) wee kwuo na nrite bụ nsusu ọnụ. Ọ dara nsusu mbụ nke oge ahụ, ọ baghị uru ikwu, ụmụ agbọghọ anaghị enwe obi ụtọ na ya.
Nke abụọ, Jenna bụ kpam kpam Ashley S. (aka yabasị girl si oge 19) nke oge. Ọbụghị naanị na Luyendyk Jr. natara ịpị akapị deluxe n'aka ya n'oge mkpọkọta ha, mana o kwukwara na ọ bụ nke kachasịmkparienweghị mkparịta ụka ọ na-emebu Anyị hụrụ ya n'anya ugbua.
Na mberede, echiche mbụ bilitere wee rute ma ụjọ jidere.
Ọtụtụ n'ime ụmụ nwanyị ahụ ka ga-agwa nwoke nke oge ahụ okwu mgbe Chelsea kpebiri na oge eruola maka convo ya abụọ na Luyendyk Jr. Ma onye na-amu amu na ịchọ ọdịmma onwe onye nanị, Chels.
edozi isi maka ntutu ntutu isi site na nkwụsị
Mana ma eleghị anya ọ bụ onye maara ihe, n'ihi na ọ na-ebute ụzọ izizi nke oge (ndo, Brittany) na - drumroll, biko - echiche mbụ bilitere.
N'ememe rose, Luyendyk Jr. na-enye onye ọ bụla Roses ma Brittane, Amber, Jessica, Ali, Bri, Nysha na Olivia.
Yep, ọ dị mma ịsị na anyị ejirila ya. Anyị ga-alaghachi ọzọ n’izu ọzọ mgbe oge 22, oge nke abụọ ikuku na ABC na 8 elekere. Ruo mgbe ahụ ...
Njikọ: Ndepụta zuru ezu nke ụmụ nwanyị 29 na-achọ 'Bachelor' Arie Luyendyk Jr.'s Heart
ụzọ kasị mma iji gbochie ntutu ịda
esi zere ntutu isi
Hollywood ihunanya ejije ejije
Akpụkpọ ụkwụ iji eyi jeans
ubi mara mma nke uwa
Ihe omume kacha mma na amazon prime